ဘီးများအားလုံးသည် ထိခိုက်မှုစမ်းသပ်မှု၊ radial fatigue test၊ bending fatigue test၊ JWL၊ VIA အရည်အသွေးစံ လက်မှတ်နှင့် ကိုက်ညီပြီး၊ (လူမဟုတ်သော ထိခိုက်မှု) အရိုးကျိုးခြင်း တစ်သက်တာအာမခံ
Max Auto မှပြုလုပ်သော အလွိုင်းဘီးများ၏ အားသာချက်မှာ အဘယ်နည်း
1. ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်သည် သာမန်စတီးဘီးများထက် 1/2 ခန့် အလေးချိန်ရှိပြီး ကားကို အရှိန်ပိုမြန်စေပါသည်။
2. ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပါ၊ ဘရိတ်အုပ်နေစဉ်အတွင်း ဘီးအချက်အချာပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပြီး ဘရိတ်စနစ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပါ
3. လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပါ၊ လောင်စာဆီချွေတာပါ၊ တာယာလှိမ့်ရန် ခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ Inertial Resistance သည် သေးငယ်သောကြောင့် ကား၏ မျဉ်းဖြောင့်မောင်းနှင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
4. သံချေးတက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ သတ္တုစပ်ဘီးကို အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ် အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မန်းဂနိစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ခရိုမီယမ်၊ တိုက်တေနီယမ်နှင့် အခြားဒြပ်စင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ စတီးဘီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု လက္ခဏာများရှိသည်။
5. ကောင်းသောအပူ dissipation ။ သတ္တုစပ်ပစ္စည်း၏ အပူစီးကူးမှုသည် သံမဏိထက် ၃ ဆခန့်ရှိသည်။ အပူပျံ့ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ အပူလျော့ချခြင်းသည် ယာဉ်၏ဘရိတ်စနစ်တွင် အချို့သောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
6. ဖက်ရှင်စတိုင်၊ ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်းစွမ်းရည်၊ သင်ရွေးချယ်ရန်အတွက် မှိုထောင်ပေါင်းများစွာ
7. တာရှည်ခံခြင်း၊ အလူမီနီယံသတ္တုစပ်သည် ခိုင်ခံ့မှုတိုးစေရန် အပူပေးထားပြီး၊ ကောင်းမွန်သော plasticity နှင့် မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု ခိုင်မာမှုရှိသည်။
8. မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ရှုပ်ထွေးသောမောင်းနှင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဘီးကို ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ၊ ဘီး၏ဝက်အူပေါက်ဒေတာသည် ယာဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ၊ ထို့နောက်ဝက်အူပေါက်ဒေတာမှန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက် တာယာကိုတပ်ဆင်ပါ။
ယခင်- 2039810020 BENZC အတွက် အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Shock Absorber Bearing
နောက်တစ်ခု: CDW/ERW/Cold-rolled တိကျချောမွေ့သောပြွန်
နောက်ရောင်းစျေး Alloy Wheel
China Alloy Wheel စက်ရုံ